အသက် ၃၅ နှစ်ရောက်ရင် Yang Zi လေး မျှော်လင့်ထားတဲ့ Life Goals တွေက ဘာတွေပါလိမ့်…? | News Bar Myanmar
အသက် ၃၅ နှစ်ရောက်ရင် Yang Zi လေး မျှော်လင့်ထားတဲ့ Life Goals တွေက ဘာတွေပါလိမ့်…?
တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီးမင်းသမီးချောလေး Yang Zi ကတော့ ချစ်ခင်အားပေးသူတွေအတွက် သူမရဲ့အနုပညာအလုပ်တွေကို တစ်စိုက်မတ်မတ်နဲ့ အားကြိုးမာန်တက် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ Yang Zi ဟာ အနုပညာရှင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်း သူမလည်း မိန်းကလေးဖြစ်တာမို့လို့ ဘဝအတွက် မျှော်လင့်ထားတဲ့ စိတ်ခံစားချက်လေးတွေ ရှိနေပါတယ်။
တလောကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Neufmode မဂ္ဂဇင်းနဲ့ Interview မှာ သူမရဲ့ Life Goals လေးတွေကို ထုတ်ပြောပြခဲ့တာပါ။ Yang Zi လေးကတော့ မကြာသေးခင်ကမှ ၂၈ နှစ် ပြည့်သွားခဲ့ပါပြီ။ Interview မှာတော့ Yang Zi လေးက “ကျွန်မက တအားကြီး မရင့်ကျက်သေးပါဘူး။
အခုချိန်ထိ ကလေးဆန်နေမိတုန်းပါပဲ” ဆိုပြီး အစချီကာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ Yang Zi ဟာ အနုပညာလောကထဲကို ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့သူပါ။ အခုဆိုရင် အသက် ၂၈ နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ပြီး တရုတ်အနုပညာနယ်ပယ်မှာတော့ နာမည်တစ်ခုနဲ့ ရပ်တည်နေပါတယ်။
အရာရာတိုင်းမှာ ရှင်းလင်းပွင့်လင်းတတ်တဲ့ Yang Zi ဟာ သူမဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ “အနုပညာထဲ စဝင်လာကတည်းက သာမာန်မိန်းကလေးလိုမျိုး နေလို့မရတော့ဘူးဆိုတာ ကျွန်မနားလည်ခဲ့ပါတယ်။
ပြောရရင် အိမ်ထောင်ပြုပြီး သားသမီးယူတာမျိုးလိုပေါ့။ ကျွန်မရဲ့ BFF ဆိုရင် အိမ်ထောင်ပြုပြီးလို့ ကလေးလေးတစ်ယောက်တောင်ရှိနေပါပြီ။ ကျွန်မကိုတောင် အခုချိန်ထိ Single ဖြစ်နေလို့ စနောက်နေတော့တာပါပဲ။ ကျွန်မလည်း ဒီအိမ်ထောင်ပြုဖို့ကိစ္စကို တွေးကြည့်မိတယ်။
ကျွန်မရင်းနှီးသလောက်တော့ အနုပညာရှင်တွေဟာ ကိုယ်နဲ့လက်တွဲမဲ့သူကို ရှာရတာ တော်တော်အဆင်မပြေဖြစ်ကြရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အနုပညာအလုပ်တွေဆိုတာ ပုံသေမရှိဘူးလေ။ မအားတာတွေများတာပေါ့။ ဇာတ်ကားတွေရိုက်နေရင် ရိုက်ကူးရေးကသူတွေနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ရတာလေ။
ပြီးကျတော့ ကျွန်မက သိပ်ပြီး Sociable မဖြစ်ပါဘူး။ သိသွားတဲ့လူလောက်နဲ့ပဲ ပေါင်းဖြစ်တော့ လူသစ်တွေနဲ့ ထပ်မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးလေ။ အဲ့တော့ ကျွန်မရဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းလေးဟာ ကျဥ်းမြောင်းလှပါတယ်” ဆိုပြီး သူမရဲ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး အတွေးတွေကိုပြောပြခဲ့ရှာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း Yang Zi ဟာ သူ့ရဲ့ အနာဂတ် Life Goals လေးတွေကို ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ “ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက အသက် ၃၀ မတိုင်ခင်တော့ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေးလေးတွေမွေးမယ်ပေါ့လေ…တွေးထားခဲ့တာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်တုန်းကမှ ဒီအစီအစဥ်က ပြောင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။ အသက် ၃၅ မှာတော့ ယောက်ျားယူပြီး ကလေးမွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ အစီအစဥ်ပြန်ချခဲ့တယ်။
ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့က အမျှော်လင့်ဆုံးပါပဲ။ ၃၅နှစ်ဆိုတော့ သိပ်တောင်မကြာတော့ဘူးနော်။ ကျွန်မတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ?” ဆိုပြီး ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ ဖွင့်ပြောခဲ့ပါတော့တယ်။ Yang Zi ရဲ့ အချစ်ရေးကိုပြောရရင် မင်းသား Qin Junjie နဲ့ ၂နှစ်နီးပါးလောက် လူသိရှင်ကြားတွဲခဲ့ပြီးနောက် တစ်ခန်းရပ်သွားခဲ့ပြီး လက်ရှိမှာ Single လေးအဖြစ် လွတ်လပ်စွာနဲ့ ဘဝခရီးကို လျှောက်လှမ်းနေပါတယ်။
အနုပညာရှင်ဖြစ်နေပေမဲ့လည်း သူမလည်း မိန်းမသားဖြစ်တာမို့လို့ ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကို မျှော်မှန်းတမ်းတမိတာ မဆန်းပါဘူးလေ။ Yang Zi လေးရဲ့ ရွေးချယ်မှုကိုတော့ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ အားပေးသူပရိသတ်တွေက ထောက်ခံပံ့ပိုးနေကြဦးမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Next လကမ္ဘာကိုပါ အလည်သွားရတော့မယ့် EXO နဲ့ GOT7 တို့ရဲ့ သီချင်းများ »
Previous « Netflix မှ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာပြသသွားမယ့် Song Joongki ရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်